दसैंमा चलायमान अर्थतन्त्र - Karobar National Economic Daily
दसैंमा चलायमान अर्थतन्त्र
query_builderSeptember 19, 2017 11:40 AM supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility1230
दसैं नजिकिँदै गर्दा बजारमा चहलपहल बढ्न थालेको छ । दसैं सुरु हुन केही दिन मात्र बाँकी रहँदा अहिलेदेखि नै बजारमा सामान किनमेल गर्नेहरूको चहलपल बढ्न थालेको हो । दसैंमा घर जानका लागि हरेक दिन बिहानैदेखि टिकट काउन्टरमा टिकट काट्नेको भीडभाड छ भने सडक पेटीदेखि डिपार्टमेन्टल स्टोरसम्म दसैंको चहलपहल बढ्न थालेको छ ।
दसैंमा सबैले नयाँ सामान किनमेल गर्ने भएकाले पनि बजारमा भीडभाड बढी देखिएको छ भने विभिन्न व्यापारिक मलले दसैंलाई लक्षित गरी विभिन्न अफर योजना सार्वजनिक गरेका छन् ।
उपत्यकामा मुख्य व्यापारिक मलमा सामान खरिद गर्ने ग्राहकको भीड लाग्न थालेको छ । न्युरोड, असन, भोटाहिटी, भाटभटेनी सपुरमार्केट, कान्तिपुर मल, युनाइटेड वल्र्ड ट्रेड सेन्टर, भृकुटीमण्डप, बानेश्वर, कोटेश्वर, चाबहिल, गोंगबुलगायतका स्थानमा व्यापारिक मलमा दसैंको चहलपहल उत्साहजनक छ । सरकारले पनि चाडपर्वमा बजारमा हुन सक्ने कालाबजारी, कृत्रिम अभाव, मिसावट, ठगी नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ । दसैं नेपालीहरूको विशेष पर्व भएको दसैंका समयमा हुने सामग्रीको खपतले समग्र अर्थतन्त्रमै सकारात्मक पर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
उनीहरूका अनुसार दसंैमा उपभोग्य सामग्रीको खपत बढ्ने हुँदा राजस्व असुलीमा वृद्धि हुने र अनौपचारिक अर्थतन्त्र समेत चलामान हुने गर्छ । प्रस्तुत छ, दसैं अर्थतन्त्रको सन्दर्भ पारेर कारोबारले विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग गरेको कुराकानीको सार ः
ग्रामीण अर्थतन्त्र बढी चलायमान देखिन्छ
दसैं पर्वमाथि आमनेपालीको सामाजिक एकता छ, चाडबाडमा पारिवारिक मिलाप छ, दसैंले समाजको सम्बन्ध बलियो बनाउँछ । यो दसैंको राम्रो पक्ष हो । साथसाथै यसले हाम्रो अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँछ । अर्को कुरा, अहिलेसम्म देखिएको हाम्रो अर्थतन्त्र भनेको कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र हो ।
त्यसमा पनि विशेष गरी धान हो । अधिकांश कृषिको काम सकिएको र मानिसहरू अलि फुर्सदमा हुन्छन्, त्यस हिसाबले पनि दसैंलाई हेर्न सकिन्छ ।
यसका साथै पछिल्ला दिनहरूमा दसैंप्रति विकृति बढेको छ, दसैंका नाममा तडकभडक बढेको छ । आफ्नै अर्थतन्त्रले धान्नुपर्ने सट्टामा अन्य मुलुकसँगको अर्थतन्त्रमा निर्भर हुनुपरेको छ ।
दसैंका बेला उपभोग नै बढ्ने हो । निधारमा लगाउने टीका, केसरी, अक्षतादेखि उपभोग गर्ने खसी–बोका तथा राँगा, कुखुरा, हाँसहरू सबै आयात गर्छौं, त्यसले विदेशी अर्थतन्त्र फस्टाउनु स्वाभाविक हो । बाह्य अर्थतन्त्र बढ्दा, विदेशी सामानको उपभोग बढ्दा हामी स्वदेशी अर्थतन्त्रप्रति विमुख भएका छौं । यद्यपि दसैंको समयमा भनौं या चाडबाडका समयमा आर्थिक क्रियाकलाप बढ्छन् । यातायात, बजार, कलकारखानाहरू बढी चल्छन् । अत्यावश्यक सामग्रीको खपत बढी हुन्छ । राजमार्गका होटलहरू बढी चल्छन् । राजधानीकेन्द्रित अर्थतन्त्र गाउँमा जान्छ । ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान देखिन्छ ।
यसले औपचारिक÷अनौपचारिक रूपमा खर्च हुन्छ । ठूलो रकम खानपानदेखि विलासी सामानमा खर्च हुन्छ । अन्य समयको तुलनामा सरकारी खर्च पनि बढ्छ । निर्यात कमजोर र आयात बढी हुँदा जीडीपीमा सकारात्मक असर पर्छ नै भन्न सकिन्न । दसैंको समयमा उपभोग्य सामानहरू बढी खपत हुने हुनाले त्यसबाट चुहावट पनि त्यत्तिकै हुने जोखिम देखिन्छ । साथै, यस पटकको दसैं अन्य समयको तुलनामा अलि फरक छ ।
दसैंको मुखमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । दसैं–तिहारलगत्तै प्रदेशको निर्वाचन हुने भनिएको छ । विशेष गरी निर्वाचनका बेला भोटका लागि अनेक सौदाबाजी हुने गर्छ । मदिराजन्य वस्तुको कारोबार उच्च हुने हुनाले यसपटक अनौपचारिक कारोबार बढी हुने देखिएको छ ।
समग्र अर्थतन्त्रमै सकारात्मक प्रभाव पार्छ
प्रा. डा. गोविन्द नेपाल
दसैं नेपालीहरूको महान् पर्व हो, संस्कृति हो । दसैंको नाममा बढी खर्च गर्ने परम्परा छ । दसैंका लागि दिने विभिन्न अतिरिक्त सुविधाले अर्थतन्त्र बढाउँछ नै । दसैंको समय भनेको बढी खर्च हुने समय हो ।
वर्षभरि काम गरेर कमाएको पैसा दसैंको खानपानमा खर्च गर्ने परम्परा छ । पछिल्ला समयमा तडक–भडक देखाउने प्रचलन पनि उत्तिकै बढेको छ । व्यक्तिको खर्च बढ्नु भनेको अर्थतन्त्र बढ्नु हो । यसले उपभोग र खपत दुवै बढाउँछ ।
त्यसका साथै पछिल्ला वर्षहरूमा दसैंका समयमा बिदाको अवसर पारेर युवा जनशक्तिहरू घुम्न जाने प्रचलन बढेको छ । यसले दसैंको अर्थतन्त्र अझै चलायमान पनि बनाउने आधार एकातिर छ भने अर्कातिर खर्च बढ्दा उपभोग्य सामानको खपत बढ्दा सरकारको आम्दानी पनि बढी हुने देखिन्छ । यातायात, कलकारखानाहरू बढी नै चल्छन् । मादक पदार्थको सेवन बढी हुने हुनाले पनि अन्तःशुल्कमा वृद्धि हुने देखिन्छ ।
आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक÷नकारात्मक दुवै खाले असर पार्न सक्छ । खाने, लगाउनेदेखि मनोरञ्जनका सामानहरूको खरिद बढी हुने हुनाले दसैंलाई खर्चिलो पर्वका रूपमा पनि हेर्ने गरिन्छ ।
झिटीगुन्टादेखि विभिन्न सामग्रीहरूलाई निर्वाध रूपमा आवतजावत गर्न दिने गरेका पनि कहिलेकाहीं सुनिन्छ । सुरक्षाका दृष्टिले नेपाल संवेदनशील सूचीमा छ । दसैंको नाममा धेरै विकृति–विसंगतिका कार्यक्रम बढी हुने हुनाले पनि सुरक्षा सतर्कता बढी अपनाउनुपर्छ ।
साथै, उपभोग्य वस्तुको बजार अभाव हुन नदिन सरकारले विशेष संयन्त्र अपनाउनुपर्छ भने कालाबजारी रोक्न र दसैंको नाममा व्यापारीहरूले गर्ने मनपरी बेचबिखन गर्न सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ र कालोबजारी गर्ने, कार्टेलिङ गर्ने, अखाद्य वस्तु बेच्ने, वस्तुको जबरजस्ती मूल्य बढाउने, सामानको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेविरुद्ध कारबाही हुनुपर्छ । दसैंमा अनुगमनलाई बढी प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । यसले समग्र अर्थतन्त्रमै सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।
आपूर्ति व्यवस्थापन नै दसैंको अर्थतन्त्र हो
चाडबाडको अर्थतन्त्र भनेकै आपूर्ति व्यवस्थापन हो । दसैं–तिहारमा उपभोग्य वस्तुको खपत बढी हुन्छ । राम्रो लगाउने, मीठो खाने चाहना बढी हुन्छ । अत्यावश्यक वस्तुको माग बढी हुन्छ । त्यसलाई पूरा गर्न प्रभावकारी अनुगमनको खाँचो छ । दसैंको समयमा समानको बढी आयात हुने हुनाले सरकारको राजस्व बढी असुली हुन्छ । आयात उच्च हुन्छ, साथै बजार यही मौकामा बढी विकृतिहरू हुने गर्छन् ।
गलत नियतका व्यापारीले कमसल मूल्यका वस्तुहरूको मूल्य बढाएर बेच्ने गर्छन् भने म्याद गुज्रिएका तथा अखाद्य सामग्रीको बिगबिगी पनि त्यत्तिकै हुन्छ । दसैंको मौकामा चन्दा माग्ने प्रचलन बढी नै हुन्छ । साथै, व्यापारीले दसैंको नाममा उपहार दिने, मदिराजन्य पदार्थहरू घरघरमा पठाउने गरेको पाइन्छ । साथै, दसैंका नाममै हुने राजमार्गका होटल–बजारदेखि गाउँका सामान्य पसलहरूमा पनि बढी भीडभाड देखिन्छ ।
साथै, सरकारको अनुगमन नहुँदा यात्रुलाई अनेक दुःख दिने, टिकटको कालोबजारी गर्ने, मूल्य बढाएर बेच्ने काम हुने गर्छ । यस्ता कुरामा भनौं या दसैं–तिहारजस्ता पर्वका समयमा सरकार बढी चनाखो हुनुपर्छ । ठग्ने र ठगिने विषयहरूमा सरकार, आमनागरिक तथा सरोकारवालाहरू सबै त्यत्तिकै चनाखो हुनु जरुरी छ ।
यसका लागि सरकारले बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने हुन्छ । दसैंको नाममा असुरक्षित तरिकाले यात्रा गराउने हुँदा सरकारले त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । दसैंको नाममा सुरक्षा सर्तकता त्यत्तिकै आवश्यक देखिन्ख्छ ।
बढी रकम लिएर यात्रा गर्न दिने हुँदा अनुगमनलाई विशेष ख्याल गर्नुपर्छ । साथै, सामानको बिक्री बढ्ने भएकाले कार्टेलिङ गरेर सर्वसुलभ रूपमा पाइने सामानको पनि कृत्रिम अभाव हुन नदिन सरकारले आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । उपभोग्य सामानको अभाव हुन नदिने गरी आवश्यक संयन्त्र खडा गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
अर्थतन्त्र दसैं भृकुटीमण्डप डिपार्टमेन्टल स्टोर दसैं पर्व